नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्ताे छ सम्भावना ? यस्ताे छ एडिबीको प्रक्षेपण « Sansar News
नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्ताे छ सम्भावना ? यस्ताे छ एडिबीको प्रक्षेपण
६ आश्विन २०७८, बुधबार १७:५०
काठमाडाैं । नेपालको अर्थतन्त्रमा सामान्य वृद्धि हुने एडिबीको प्रक्षेपण एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२२ मा नेपालको अर्थतन्त्र (बजार मूल्यमा) ४.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकको प्रमुख प्रकाशन ‘एशियाली विकास परिदृश्य’ लाई आज अद्यावधिक गर्दै उसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सामान्य वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको हो ।
बैंकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो ।